सुन्दर देखिन नाकको सर्जरी गर्दा यि नायीकाको भयो यस्तो हालत, उल्टै करोडौ रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्यो – Dainik Samchar
सुन्दर देखिन नाकको सर्जरी गर्दा यि नायीकाको भयो यस्तो हालत, उल्टै करोडौ रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्यो
February 8, 2021 218
एजेन्सी । सुन्दर देखिने चाहना सबैलाई हुन्छ । तर सुन्दर देखिनका लागि अप्राकृतिक काम गर्दा एक नायीकाले आफ्नो भएको सुन्दरता पनि गुमाउनु परेको छ । चिनियाँ अभिनेत्री र गायिका गाओ लियु ले हालै कस्मेटिक सर्जरी गरिन् ।
तर परिणाम उनले सोचेको भन्दा ठिक विपरित भयो । उनले तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफुमा भएको नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी दिएकी छन् । अहिले उनको त्यो तस्बिरमा धेरैले प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनी एक जना साथीको सल्लाहमा एक कस्मेटिक क्लीनिकमा नाकको सर्जरी गरिन् । त्यसका लागि ४ घण्टाको समय लाग्यो । आफुले चाहेको आकारमा उनले नाक बनाउन चाहिन्थन् । तर उनको चाहनाको ठिक विपरित भएको नाकको आकार पनि विग्रियो । सर्जरी गरेर थपिएको उनको पुरै नाक कालो भएको छ ।
पछि उनले थाहा पाइन् की जुन क्लीनिकमा उनले सर्जरी गराइन् त्यो क्लीनिकसंग सर्जरी गर्ने लाइसेन्स पनि थिइन् । उनको यस्तो अवस्था पछि सर्जरीको फाइदा बेफाइदाका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ ।
अभिनेत्रीका अनुसार नाककै कारण उनले दुईवटा प्रोजेक्टवाट हात धुनु परेको छ । जसवाट उनलाई करौडौको नोक्सानी पनि भएको छ । सम्झौता भएका अन्य प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले उनले त्यसको लागि करोडौ रुपैया जरिवाना पनि तिर्न पर्ने हुनसक्छ ।
Prevमहिलामाथि दु’रव्य’व’हा’र गरेको आ’रो’पमा टेलिकमका अधिकृत प’क्रा’उ
Nextकाठमाडौं विराटनगर हवाई भाडा रु २ हजार मात्र
रोकिएन आँखामा आँ,शु :१७ नेपालीको ला’श नेपाल आयो
कोरोना पुष्टि भएपनि कुनै लक्षण नभएका एकै परिवारका अनौठो तरिकाले तीन जनाको मृत्यु
गौतमबुद्ध अ’न्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नि’र्माण को लागि प्रधानमन्त्री केपि ओलिले करोडौं रकम दिने घोषणा ! भिडियो सहित
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (692)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (593)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (592)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (581)
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना,हुँदा ५ विद्यार्थीको मृत्यु मनमा दया भए (RIP) लेख्नुहोला:, ’ (568)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (563)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (559)